Shir lagag hadlayo horumarinta Caafimaadka oo lagu qabtay Garoowe. | AllPuntland.net
Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa ku qabatay magaalada Garowe shir lagag hadlayay waxyaabihii u qabsoomay 6 billood ee la soo dhaafay , gaar ahaan qorshayaasha caafimaadka ee ay ka caawiso Hay’adda UNICEF .
Shirka waxaa ka qayb galay Wasiirku xigeenka wasaaradda Caafimadka Dowladda Puntland , Agaasimaha Guud ee wasaaradda , Madaxa Hay’adda UNICEF qaybta caafimaadka ee Soocmaaliya iyo shaqaalaha sida gaarka ah oga shaqeeya qaybaha caafimaadka ee ay iska kaashadaan wasaaradda iyo UNICEF.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlada Puntland Mudane Dr. Cabdirisaaq Xirsi Xasan , ayaa shegay in shirkaan loogu talagalay in looga cabir qaato waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda caafimadk 6 bilood ee lasoo dhaafay taas oo uu sheegay in kaga cabir qaadanayaan in la gaaray qorshihii ay dagsatay wasaaradda caafimaadka Puntland .
Wasiirku xigeenka wasaarada Caafimaadka Puntland Mudane Cabdifataax Xasan Xuseen (Waloore) ayaa ku amaanay shaqaalaha wasaaradda sida ay muhiimada wada jir ugu siinayaan Caafimadka Puntland , waxaan uu balan qaaday inuu qayb ka noqon doono si wada jir loogu guto waajibaadka wasaarada maadaama dhawaan xilkaan uu usoo magacaabay Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
HALKAAN KA DHAGAYSO CODADKA.